Noma ukunquma ukuthi waboleka imali yini nezimfuno ku Ukuhlolwa
トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Noma ukunquma ukuthi waboleka imali yini nezimfuno ku Ukuhlolwa
Lapho befaka isicelo enqolobaneni, abathengi imayelana luhlolo kuyinto okhathazayo.
kuyinto kuka ayizange iphumelele luhlolo naphezu isimo ekuhluphekeni ngaphandle imali eyanele, imali ayikwazi ephakanyiswe.
Ngakho, ake ukuba azi kusengaphambili ngokushaywa ngisho kancane ukuthi luhlolo kungenzeka njengoba, kungakhathaliseki ngezinga kuyinto umkhawulo amount engenhla imali enqunywe luhlolo.
, hhayi kimi abuyisele ngobunono imali, ngeke eziphendula zababolekisa ngemali ukulahlekelwa.
Ngakho-ke, ephansi futhi engesiyo eqondile yokuziphilisa, kungenzeka ukuba kuthathwe nomlingani ephezulu ngenxa letinemakhono ubuciko.
Ngakho, sicela ugcine ngokucindezela ngoba kakhulu ukuthi une criteria ezifana kwaloku lokulandzelako ngendlela zababolekisa ngemali. High futhi eliphansi
engenayo: ayanda emikhulu umkhawulo,
ngenzuzo ekuqaleni ibe phezulu kuye umkhawulo ephansi langempela uma ongaphakeme noma oluzinze: Uma ungeyena uzinzile, ephansi umkhawulo noma nginqabe ukubuyekeza, ezinzile futhi esimweni okungukuthi kakhulu sibuyekezwe ngaphansi
umqondo ukukhuphula umkhawulo akugcini imali, Angazi ukuthi yini iphuzu ngoba ngenzuzo nawe ungase ube munye.
Lokhu Yiqiniso, labo kohlelo wenyanga, ezifana esigcwele kanye nabasebenzi zesikhashana, kunqunywa ukuthi kukhona imali ngisho abantu abasebenza njalo ngehora, ezifana amatoho kanye itoho.
Nokho, Dattari entsha abathweswe iziqu inkampani umsebenzi, bavame luhlolo kuyoba kanzima futhi noma maqondana ingxenye, ezifana ngokushintsha emsebenzini izikhathi eziningi.
Ngesizathu esifanayo, kuyinto ngaphezulu proprietorship yedwa futhi kunzima njengoba luhlolo. Ukuze
kwesamba semali, luzobuyekezwa ngokuthumela njenge-khokha izinqamu noma Ukugodla ukushelela.
Esikhathini ingxenye ezezimali umthengi, uma kungekho iphutha emsebenzini ukuthi kwathiwa, akekho ngaphansi kunjalo ukuqhubekela Ukuhlola ngisho zokweboleka ngaphandle kokuthi uthumele amadokhumenti ukufakazela engenayo.
inkomba / proof'll ukugcina babe nolwazi ngaphambi kokuba ukuboleka imali
inkomba / < a href = "http: //xn--t8ja5qbdc8bd3083eea5016pfa.com/cooltaiwan/11th_hours.html "> ukulondoloza isikhashana
lezo ezidinga isikhathi ukuboleka imali kanye
imali ababolekisi is waziwa kusukela epilweni yangamalanga, noma ngabe ayikho inkinga ngisho ukubolekisa ngemali, futhi omunye nenqubo ye luhlolo .
isibonelo imigomo, omunye futhi okungukuthi ukubeka ukubeka indlu, abenza ngokuphinda ushintsho umsebenzi yenziwe kusimo luhlolo Kukhona kungenzeka ukuba silahle .
Ngaphezu kwalokho, ngaphezu kwalezi, uma eye yaba nomlando ingozi, ezifana buyiselo is washaya omunye kanye ejensi ulwazi lekhadi ukuthi ube nomuzwa wokuboleka esikhathini esidlule, eyindoda flit ingozi ungase ngabe yenqatshwe ku Ukuhlolwa .
futhi, uma eboleka isicelo ezikhungweni zezimali amaningi esikhathini esifushane, uzobe okwesikhashana ebolekiwe kushiwo .
Lona, ingozi Ngokungafani umlando, nengxenye ngonyaka Ezilotshwe futhi cishe unyaka owodwa kusukela ngeke, kodwa leyo mali futhi sikhipha isicelo Ukubuyekeza phakathi, kunengozi ukuthi isikhathi kuba eside kwenzeka .
Ngakho, Zama ukubeka isikhathi esisodwa Uma ngenqaba isibuyekezo. yini noma cha kukhona ezifana
umlando ingozi, ngakho ungakwazi ukubuka kusuka ejensi ngalinye iphuzu contact noma eliyisiqalo ukukwazisa ukufanisa .
kuze kube manje zokweboleka isimo
Ngisho noma kungekho inkinga
ngenzuzo ngaphezulu nangaphansi kwamanzi ukuziphatha, lo ngo-ukuboleka, kukhona ukubuyekeza iba Ezimweni ezimbi kakhulu.
Emthethweni zamanje, ngoba uye waba umthetho ezingeke ukuboleka kuphela kuze kube okukodwa kokuthathu imali yonyaka njengoba inani lemali isiqondiso. Nakuba umbuzo
temlomo kukhona iphuzu evame ukubuzwa, qaphela ngoba ngokuvamile bengingatshelwanga ngenxa luhlolo.
Nokho, kulabo abanikazi bamabhizinisi ngabanye ukuboleka njengoba izimali zebhizinisi, kuyoba ngaphandle kwenkululeko Inani isiqondiso.
le ngaphezu, labo ale Nhlangano futhi, ngoba yisiboniso ezifana kwemali siqu ukuthi nge ngeke abe ngaphansi, uma, esimweni wokuboleka iye esashiwo isamba iziqondiso, izimo ngokunikeza ingcebo yisiboniso uzokwazi ukusula.
kuhlanganise ezezimali umthengi, ukuthi ukuhlolwa ukuboleka imali izikhungo zemali, ulwazi "Umuntu owenza isicelo," ezifana engenayo nokuziphatha kuyodingeka wenze. Ngisho lent
imali, uma kunqunywa ukuthi isimo, okungase kwabasiza ngaphandle kokuba aphazamisa phakathi, luhlolo futhi siyodlula ngaphandle kwezinkinga.
Ngakolunye uhlangothi ukuthi, ufuna ukuboleka imali esimweni lapho isimo samanje ngaphambilini ongabonakali, noma uma kunqunywa ukuthi hhayi kuphela ukwenza ukubuyiswa kwemali uhlelo engacacile futhi ivame kushiwo ukutsi kunjalo at the stage of Ukubuyekeza idokhumenti.
Ukuze zokweboleka simo, ngisho noma kwenziwe isicelo kwezinye izikhungo zezimali, ma-ejensi imininingwane yekhadi bekulokhu ukwabelana kolwazi.
uma, ubuye zithole ithuba ukuzama ukuqinisekisa kungase iye yachazwa uhlobo olunye ulwazi uma uke bawela luhlolo. Futhi
ngendlela efanele, uma benza icebo Lihle sokukhokhwa, kufanele ukuboleka imali njengoba oyifunayo. Kubandakanya
umthengi ezezimali, ukuze luhlolo ukuboleka imali izikhungo zemali, ulwazi "Umuntu owenza isicelo," ezifana engenayo nokuziphatha kuyodingeka wenze. Ngisho lent
ngendlela efanele, uma benza icebo Lihle sokukhokhwa, kufanele ukuboleka imali njengoba oyifunayo.